Miyaad Sheegi Kartaa Waxa Si Ka Ah Sawirada Bisadahaan? 19 Jir Ayaa Dunida Kaga Yaabsaday Sawiradaan - Arimaha Bulshada
Farshaxaniistaha da’da yar Otomi Haru ayaa gacanta ku sawira bisado u eg sawiro run ah, waxayna ku qaadataa inuu hal bisad sawiro 30 saacadood iyadoo ay adag tahay inaad kala garato sawir lagu qaaday kaamiro iyo farshaxankiisa gacanta.
19 jirkaan reer Japan ee isaga is baray sida loo sameeyo sawiro gacmeedka ayaa yiri: “Waxaan ku waalanahay inaan sawiro indhaha, sidaasi darteed farshaxan walba oo aan sameynayo waxaan ka bilaabaa indhaha.
“Ka dib waxaan sawiraa tin walba oo ay bisadu leedahay.
“Ka hor inta aan sawirka dhameystirin, waxaan muujiyaa timaha iyo shaarbaha bisada”
Marka ay timaado sawirida bisadaha yar yar iyo kuwa waa weyn sida shabeelka iyo haramcadka, wuxuu ninkaan il fiican u leeyahay sawiridooda iyadoo farshaxankiisa lagu qaldo sawir caadi ah oo kaamiro lagu qaaday.
Halkaan hoose ka eeg sawirada uu gacanta ku sameeyay:
Ma aamineysaa bisadaan gacanta ayaa lagu sawiray?
Qalimaantii lagu sawiray bisada oo dhinac yaala sawirka
30 saacadood ayay ku qaadataa inuu hal sawir dhameystiro
Farshaxaankan lagama garanayo sawir rasmi ah oo kaamiro lagu qaaday
Tin walba ayuu sawiraa si farshaxan uu ugu ekaado wixii dhabta ahaa
19 jirkaan wuxuu ku waalan yahay sawirida indhaha